Hagagana ary mametra-panontaniana ny mponina ao amin’ny Fokontany Antafiampatsa sektera Farafangahely, Antsohihy manoloana ny fahasimban’ny lalana rarivato vao namboarina. Lalana avy any amin'ny Bazary be na BOA Haute-Ville midina Farafangahely, Fokontany Antafiampatsa izy ity, ary tamin’ny volana Martsa 2020 iny no nanaovana “réception” na fandraisana ny asa vita. Roa andro taorian'izay, hoy ny fanamarihan’ny mponina dia efa nahitana fahasimbany ilay lalana ka niverenana namboarina indray, dia izao izy potika izao, nefa tsy mbola tafiditra tanteraka ao anaty fahavaratra isika. (Jereo Sary Tohiny)
Faritra mirahavavy mampihatra ny SERASERA HO AMIN’NY FAMPANDROSOANA, na ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe C4D na « Communication For Development » no resaka eto. Ny Vovonana C4D dia ivondronan’ny sehatra maro toy ny :• Vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (Faritra, Kaominina),• Fitaleavam-paritra (Serasera sy Kolon-tsaina, Fahasalamam-bahoaka, Fanabeazam-pirenena, Tanora sy Fanatanjahan-tena, Rano sy Fidiovana ary Fanandiovana, Mponina sy Fiahiana ara-tsosialy ary Fampiroboroboana ny vehivavy),• ONGs sy Fikambanana (Vokovoko Mena, St-Gabriel, Rano WASH, Price…),• Fandaharan’asam-panjakana (BNGRC…)
Anjalazala - Antsohihy : Ravan’ny Zandary ny andian-dahalo mpangalatr’omby
Tra-tehaka tao amin'ny kijana Angorogabe Fokontany Andapinarosy, Kaominina ambanivohitra Anjalazala, Distrikan'Antsohihy ny 21 Novambra 2020 ny lehilahy telo voalaza ho mitazona omby maloto maromaro. Tratra niaraka tamin'izy ireo koa ny basim-borona Baïkal iray, tsy misy antotan-taratasy, sy bala vita gasy iray, tranom-bala efa nipoaka iray. Nisy koa kitozan-kenan'omby halatra iray gony sy tapany, ary koa omby tsy mazava miisa 52 norobain’ireo olon-dratsy tany Ambararaty any Mandritsara. Naiditra ambalam-pamonjana ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Anjalazala ireo omby tsy mazava miisa 52. Nohazomina vonjimaika ao amin'ny tobim-paritry ny Zandary Antsohihy ireo olon-dratsy. Nogiazana ao amin’ny tobim-paritra Antsohihy ny basim-borona, ny bala ary ny kitoza. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 24 novembre 2020 09:36
Tsihombe : Voasambotra ilay jiolahy mitam-basy nikasa hanafika toeram-pivarotana
Lehilahy iray, nitazona basy poleta vita gasy, no nikasa hanafika toeram-pivarotana iray tao Tsihombe, ny alin’ny 19 novambra 2020. Niroso tamin’ny fitsongoana dia avy hatrany ny Zandary vao nahazo fampandrenesana.Nandositra ilay olon-dratsy ary nifanenjehana dia tratra. Azo tamin'izany ny famaky sy ny poleta vita gasy teny aminy. Notazomina tao amin’ny Brigady Tsihombe ilay jiolahy sy ireo fitaovam-piadiana teny aminy, ary natao fanadihadiana. Karohina ireo mpiray tsikombakomba aminy. (Jereo Sary Tohiny)
Ny 18 septambra 2020 tao Antaimby, Fokontany Antanifotsy, Kaominina ambonivohitr’i Sambava, Faritra SAVA ny moto tsy mataho-dalana iray marika MADA no very. Nahazo fampitam-baovao ny Zandary avy ao amin'ny Tobin-janam-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Bemaranja fa ao Beramanja io moto io sy ny tovolahy nahiana mafy ho nangalatra azy. Nanao ny fikarohana ifotony ireo Zandary tao Beramanja ny 22 novambra 2020 ka tra-tehaka niaraka tamin'ilay moto nangalariny ilay tovolahy nahiahiana, ary niaiky avy hatrany ny heloka vitany. Hatolotra ny tompony tsy ho ela ny moto. (Jereo Sary Tohiny)
Zazavavy kely iray, 13 taona, no maty natelin’ny rano Maevarano, tao Befotaka Avaratra, Distrika Analalava, Faritra Sofia, ny tolakandron’ny alahady 22 novambra 2020. Hisasa sy hanasa lamba no namonjeny renirano, saingy nibolisatra dia nilentika. Efa adim-pamantaranandro telo taty aoriana vao hita, saingy efa tsy avotra intsony ny ainy. Mpianatra ao amin'ny EPP Befotaka Avaratra ilay zazavavy kely namoy ny ainy ity.
Tambazotran-jiolahy iray ahitàna jiolahy miisa 15 no saron'ny Vondron-tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Miarinarivo. Notafihan'ny andian-jiolahy ny tokantrano iray tao Anorankely Fokontany Anorambe, Kaominina Ambatomanjaka, Distrika Miarinarivo, Faritra Itasy ny alin'ny 10 novambra 2020. Lasan'ireo jiolahy tamin'izany ny vola mitentina iray tapitrisa Ariary teo ho eo, ary namoizan'aina olona iray izay mpitondra fivavahana. Lonilonim-pianakaviana mahakasika ny famarotana lova no antony ny fanafihana, ka ny zanany sy ny zafikeliny ihany no nanao izany. Olona miisa 15 no voarohirohy amin’ity raharaha ity, ka efa voasambotry ny zandary ny 12, mbola karohina kosa ny 03.
Nidina ifotony nijery ny zava-misy sy ny dingana efa vita any Amboasary atsimo ny delegasiona tarihin’ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian. Nanambarany fa : “ambony dia ambony ny fanamby miandry antsika raha ny ady amin’ny kere aty Atsimo no resahina”. Mahakasika ny fanampiana ireo olona tratry ny fahasahiranana, dia hapetraka ao Amboasary ny « Centre opérationnel de coordination » izay ho eo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ary homena fitaovana sy teti-bola mifanaraka amin’izay filàny izay. Io foibe io no hibaiko sy handrindra ny asa rehetra izay atao ao amin’ny Distrikan’Amboasary. Hanana solontena ao anatin’izany ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo ratsa-mangaikan’ny fitondrana. Jerena mandritra izao dian’ny delegasiona izao koa ny toerana hametrahana ny CRNM na Centre de Réhabilitation Nutritionnelle et Médicale, izay hiasa mandavan-taona, ary hasiana “Banque alimentaire” eo akaikiny. Io “banque alimentaire” io dia toerana natokana hametrahana sakafo, hanampiana ireo izay ianjadian'ny olana ara-tsakafo rehefa main-tany. Afaka manatona io CRNM io ihany koa mandavan-taona, ireo olona misedra fahasahiranana ara-tsakafo. Ankoatra an'Amboasary dia hapetraka ao Ambovombe, Tsihombe, Beloha, ary Ampanihy ny CRNM.
Andalana ny fanorenana toeram-pialantsasatry ny mpampiasa ny lalam-pirenena faha-4 ho fiarovana ny mpampiasa lalam-pirenena ary fampihenana ny lozam-pifamoivoizana. Ao amin'ny toerana atao hoe : Ramala, Fokontany Ambohinaorina, Kominina Kiangara, Distrika Ankazobe, Faritra Analamanga, RN4 PK 179, no hisy azy ity. Hametrahana ny "Brigade Routière Spéciale (BRS)" an'ny Zandarimaria ihany koa eo, ary natao ny 20 novambra 2020 ny fametrahana ny vatofototry ny asa fanorenana ny foto-drafitrasa ho amin’izany. Hisahana ny fiarovana ny lalam-pirenena faha-4 manomboka any Talatamaty ka hatrany Maevatanana, izay tsapa tato ho ato fa anjakan'ny asan-jiolahy matetika ity BRS vao naorina ity.
Nitarika delegasiona tao amin’ny Distrikan’i Beloha - Faritra Androy, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christiana ho fijerena ny zava-misy sy ny dingana efa vita ary fitondrana vahaolana vonjimaika, fohy ezaka ary lavitr’ezaka ho famahana ny olana amin’ny fisian’ny hanoanana mitarazoka na kere. Napetraka ao Beloha ny “Kaly Tsinjo”, ary ezahina hiparitaka manerana ireo Kaominina rehetra mandrafitra ny Distrikan’i Beloha izany. “Fanampiana vonjy maika ho an’ireo izay tena sahirana ihany izao nentinay izao, fa mbola hisy fandaminana hafa apetraka, indrindra fa ny vahaolana ho lovainjafy ka hiteraka fampandrosoana amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny sehatry ny fanabezana, ny fahasalamana, ny rano ary ny fametrahana fotodrafitrasa maro”, hoy ny Praiminisitra.